Zuva nezuva, vanenge 780 000 vanhu kutenda muna Jesu!
Kare munhau kuti vakawanda tikaponeswa munyika munguva yedu. Tiri kurarama munguva apo pakukura chirimwa kwenyika kuchengetedza mu!
Vazhinji vakabatikana vakamirira tsvina guru nguva yedu. Nezvavanofunga kumutsidzirwa avo chikamu, havachafaniri zvachose. Asi, shamwari dzinodikanwa: ichi akava generalfel. Pane rumutsiriro rukuru munyika yedu iye zvino! Never kare munhau vane zvakawanda tikaponeswa sezvazvakaita zvino. Inenge kusvika 780 000 vanhu kugamuchira Jesu uye uchaponeswa ose zuva pasi pose!
Chokwadi, zviri pasi kutambisa nguva yedu, kuti isu kuziva, asi regai tarisisa dongo bofu, asi farai kuti vanhu vakawanda kudaro kupinda muushe hwaMwari ose zuva. Dzimwe nguva ndinofunga kwevaApostora nguva yaJesu godo vedu nhasi achava chikamu nguva iyi inokosha kuti iye zvino tiri kurarama. The nguva apo Kudeuka chirimwa munyika kuchengetedza mu!
Wenyika Rumutsiriro kuitwa nhasi
Kare munhau kuti vakawanda tikaponeswa munyika sezvazvakanyorwa kuitika munguva yedu. Zuva nezuva, vanenge 780 000 vanhu kutenda muna Jesu!
Tingatarisira kuti nhasi pane anenge mabhiriyoni 2,5 vaKristu munyika.
70% izvi vakasvika pakutenda vanoziva munguva 1900s, zvichiita mabhiriyoni 1.75.
Izvi, bhiriyoni 1.75, 70% wavo vauye kutenda pashure 1945, izvo zvinoreva anenge mabhiriyoni 1,2.
Izvi, mabhiriyoni 1,2 vaitenda pashure 1945, 70% akatenda okupedzisira matatu apfuura.
Izvi zvinoreva kuti vanenge mamiriyoni 857 vakatenda okupedzisira makore matatu.
Izvi zvinoreva kuti vanenge mamiriyoni 285 vakatenda nechimwe matatu apfuura uye kutangazve mberi.
Hazvinei zvauri kuferefeta, unoona kuti kunyatsoita kuwedzera zvinoshamisa munguva yedu.
780 000 zuva roga roga
Kana ini mberi yayo kukarukureta remakore, mamiriyoni 285 achaponeswa ose gore kuchava pamusoro:
mamiriyoni 23.7 akaponesa mwedzi wose
mamiriyoni 5.5 akaponesa vhiki ose
780 000 akaponesa rimwe zuva
Tiri uchisangana pakukura kumutsidzirwa hwenyika! Kare munhau kuti vakawanda tikaponeswa munyika sezvazvakanyorwa kuitika munguva yedu.
Vecka 19, onsdag 12 maj 2021 kl. 15:40